बैकुण्ठ र पूर्णकलालाई 'दुई कुराले' ठग्दा किन बाजा बजाएर नाचे दीपक बिम्ली ? (हेर्नुहोस् भिडियो) - MazzakoNews
Home / INTERVIEWS / बैकुण्ठ र पूर्णकलालाई ‘दुई कुराले’ ठग्दा किन बाजा बजाएर नाचे दीपक बिम्ली ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
बैकुण्ठ र पूर्णकलालाई ‘दुई कुराले’ ठग्दा किन बाजा बजाएर नाचे दीपक बिम्ली ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
Mazzako News 15th December 2017	INTERVIEWS Leaveacomment
चौतारीको लहरे पिपल, ओझेलै पार्यो बरको छायाँले
जिन्दगीमा मलाई दुई कुराले ठग्यो, एउटा आफ्नो रुपैले हौ अर्को मायाले
नेपाली लोक सांगीतिक क्षेत्रका बहुप्रतिभावान श्रष्टा तथा गायक बैकुण्ठ महत र पछिल्लो समयमा आधुनिक शैलीमा लोक दोहोरी गाउन खप्पिस गायिक पूर्णकला बिसीको स्वरमा भर्खरै ‘दुई कुराले ठग्यो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ ।
पञ्चेबाजाको उक्त गीतको भिडियो निकै रमाईलो बनेको छ । महतले आफ्ना सदाबहार दौतरी प्रल्हाद सुवेदीसँगको सहकार्यमा वरदान डिजिटलबाट गीत ल्याएका हुन् । पोखरामा निकै चर्चित दीपक थापा र हाँस्य टेलिसिरियलकी चर्चित अभिनेत्री शुशिला निरौला बिम्लीले भिडियोलाई रमाईलो बनाएका छन् ।
याम गुरुङ र आरुषी मगर फिचरिङ रहेको भिडियोको निर्देशन गुरुङ आफैले गरेका हुन् । करन चैसिरले खिचेको भिडियो सम्पादन विष्णु शर्माले गरेका हुन् । निकै मिठो स्वरका धनी गायक बैकुण्ठ महतको निकै चर्चित गीतहरु रहेका छन् । ठ्याक्कै एक वर्ष अघि गत मंसिरमा रिलिज भएको ‘हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली’ अत्यन्त चर्चित भयो । जुन गीतमा पनि बैकुण्ठ र पूर्णकलाकै स्वर छ ।
सानैदेखि विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट हुँदै आएका महत ब्याचलर सुरु गर्नेबेलादेखि मात्र रेकर्ड गर्न थालेका हुन् । २०६४ मा ‘मागेजति बरदान पाको भा’ गीत बिमलराज क्षेत्रीसँग मिलेर निकालेपछि महतलाई सबैले चिने । उनको सोहि एल्बमको ‘जाउँ है माया बटौली गाउँतिर’ का साथै पञ्जेबाजाको गीत ‘औंठी स्वयम्बरको’ सबैभन्दा चर्चित बन्यो ।
पञ्चेबाजामा निकालिने गीत अधिकांश केटाकेटी प्रेम बिछोड भएको निस्किरहँदा उनको यो गीत नौ वर्ष पुरानो हुँदा पनि अझै पनि बिहेमा बज्ने गर्छ । विरहले छुने बेलैमा, नपढेरै हो जस्ता गीत पनि उनको चर्चित छ ।
यसबाहेक धोका दिन सख्त मनाही छ, दोस्ती पुरानो, दुनियाँलाई घात नगर, रेडियोमा गीत सुनेर, मिसकल हाने पुग्छ, मान्छेको जिन्दगानी, के छ तिम्रो ईच्छा, घाटाको कारोबार, पानी जहाज जस्ता गीत महतले गाए । नेकपा एमालेको चुनावी गीत गाएका महतको स्वर चुनावताका निकै गुञ्जियो ।
Previous सागर आले मगरको पहिलो ‘सालैजो’ गीत, एक दिनमै आधा लाख भ्युज
Next केकी अधिकारीले लालबाबु पण्डितलाई यसरी नचाए (भिडियो)